Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguSigrid
Ukuzilungiselela, iTV, iWifi yasimahla, ikhitshi lakho kunye nebhafu; indawo yokuhlala kwipatio esezantsi. Ukuphuma/ukuphuma kubhetyebhetye ngamalungiselelo angaphambili.
Isiseko esifanelekileyo sokuphonononga indawo entle yaseDonegal, iWild Atlantic Way kunye nelifa lakudala laseMantla; ukhetho lweelwandle ezikhuselekileyo ngaphakathi komgama wokuqhuba olulula. Ibekwe kwilali w. I-Pub; Ivenkile kunye nePosi. Iisuti 2 abadala plus max. Abantwana aba-2 ukuya kwi-12 leminyaka ubudala.
kufutshane: Derry City, WAWay, Buncrana, Inishowen, Letterkenny, The Northern Coast (G.Causeway, GoT locations, Golf)
Indlu ehonjisiweyo & nendlu yangasese isetyenziselwa kuphela iqela leendwendwe (akukho kwabelana nabanye); Igumbi lokuhlala w. isitovu sesibaso esiqinileyo; ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo (umpheki, umatshini wokuhlamba izitya, imicrowave, izitya, iipleyiti, iimbiza, izitya, njl.); izixhobo zokuayina; ilineni yebhedi; Igumbi lokuhlambela elineshawa & iwasha / isomisi; iitawuli, isomisi seenwele, izixhobo zokuhlambela; Phezulu: Igumbi lokulala eliphindwe kabini elinendawo eninzi yokugcina; Iibhedi ezi-2 ezongezelelweyo zeendwendwe eziphathwayo zinokulungiswa nokuba kukweliphi na igumbi. Abangatshayiyo kodwa asinangxaki kwipatio. Sihlala kwindlu elandelayo kwaye ubuncinane omnye wethu uhlala ekhona ukuze aphendule kwiimfuno zeendwendwe okanye iingcebiso zokhenketho (amaphecana & neemephu zinikezelwe)
QAPHELA: ezininzi ezongezelelweyo zibandakanyiwe kumaxabiso ethu. Intlawulo 'yeNkonzo' oyibona kwixabiso lilonke xa ubhukisha yi-AirBnB eyi-17% yomrhumo - hayi wethu.
4.89 · Izimvo eziyi-205
I-Cottage ikwiziko lelali, ineofisi yeposi, ivenkile kunye ne-pub kumganyana nje osuka kude. I-Dunmore House & Gardens (evulekele kuWonke-wonke,;indawo yoMtshato) yimizuzu embalwa uhambe ngendlela
Umbuki zindwendwe ngu- Sigrid
Ababuki zindwendwe bahlala kufutshane kwaye bayavuya kakhulu ukukunceda ngeengcebiso & nezalathiso ukwenza ukuhlala kwakho kube ngamava awodwa ngokwenene. Jonga kwiNcwadi yesiKhokelo yethu ukukhetha iingcebiso zohambo :-)
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Carrigans